Marihina am-boalohany aloha fa natao ho an’ireo olon-droa efa hita ho misy soritra fifandraisana na « complicité » ireto torohevitra ireto fa tsy ho an’ny olona mbola tsy nifanerasera taminao mihitsy akory. Tsapanao fa mankafy ny miresaka aminao izy saingy tsy ampy ilay tselatra irosoana lalina kokoa sisa. Marina fa tsy azo terena ny fitiavana. Azo hatao kosa ny manampy tosika ny olon-tiana hanapa-kevitra. Ireto no atao :
Tsy manatona azy akaiky loatra
Nialohan’ ny nahita azy dia vehivavy mahaleo tena ianao. Aza miova amin’izany mihitsy. Mijanona ho mahaleo tena hatrany. Indraindray aza dia tokony hanalavitra azy kely mihitsy. Amin’izay mantsy izy halahelo anao. Tsy hanana fahafahana na fotoana hahalelovana anao kosa izy raha toa ianao ka eo foana, vonona ny handray azy isaky ny mitady anao izy. Rehefa eo ianao indraindray dia hahatsapa kosa izy fa sarotra ilay tsy misy anao.
Manana fiainana ankoatra azy :
Ny vehivavy latsa-pitia matetika dia manakatona ny fiainana ivelan’ilay olon-tiany ary lasa mifantoka aminy tanteraka. Hadisoana tanteraka izany. Ho sempotra mantsy izy ka ho mora leo anao indray. Ny tena mety dia ny manohy ny fiainana toy ny taloha ihany. Mihaona amin’ny namana, miaraka amin’ny fianakaviana. Tohizo ny fanaovana ny alavoly fanaonao. Hanampy anao tsy ho « lakaoly » be aminy koa ny manao izany.
Mitazona mistery ny ampaham-piainana
Mora leo izay ny lehilahy. Tsy mety aminy ny fiainana feno fahazarana be fa mila zavatra miovaova sy manaitra izy. Ahoana ny hanaovana an’izany? Voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy mitazona ny ampaham-piainana ho mistery na dia efa te-hizara aminy ny momba anao rehetra aza ianao.
Manao izay hahatonga azy ho gaga aminao
Asehoy azy mian-dalana fa tsy lafy iray ihany ny maha-ianao anao. Amin’izay ho gaga foana izy raha vao momba anao. Ho leo anao mantsy izy raha fantany ao anatin’ny volana vitsy avokoa ny momba anao rehetra sy ny toetranao. Raha noheveriny fa olona maotina sy matotra be ianao dia hanaitra azy ny hahita anao hitarika azy handeha hivoaka hiaraka handihy ohatra. Tena handaitra manokana ny manao zavatra iray izay tsy ampoiziny ho vitanao. Tandremo anefa, aza manery tena be ndrao hanao adalana indray.
Mijanona ho ianao ihany
Aza mampiseho lafy ankoatra ny maha ianao anao anefa. Azo antoka fa ilay ianao amin’ny tena maha-izy azy anao no nanintona azy hiresaka aminao. Ny hany ataonao kosa dia ny mikolo ny mistery momba anao mba hahatonga azy te-hahafantatra anao be be kokoa. Tsy tokony ho ao anatin’ny fotoana fohy izany.